Tay Za MC, Dobule Nyi, Lu Khit (စိုးလင်းထိုက်၊ဦးညီ၊ဝေလင်း) - Ta York Ta Myo (တစ်​​ယောက်​တစ်​​မျိုး) [2016 Album] (320Kbps!) - Mg Shan Lay
Home 320 Kbps! Album Double Nyi High Quality Lu Khit Tay Za MC လူခေတ် Tay Za MC, Dobule Nyi, Lu Khit (စိုးလင်းထိုက်၊ဦးညီ၊ဝေလင်း) - Ta York Ta Myo (တစ်​​ယောက်​တစ်​​မျိုး) [2016 Album] (320Kbps!)
Tay Za MC, Dobule Nyi, Lu Khit (စိုးလင်းထိုက်၊ဦးညီ၊ဝေလင်း) - Ta York Ta Myo (တစ်​​ယောက်​တစ်​​မျိုး) [2016 Album] (320Kbps!)
11:33:00 AM 320 Kbps!, Album, Double Nyi, High Quality, Lu Khit, Tay Za MC, လူခေတ်,
Ta Za MC, Dobule Nyi, Lu Khit (စိုးလင်းထိုက်၊ဦးညီ၊ဝေလင်း) - Ta York Ta Myo (တစ်​​ယောက်​တစ်​​မျိုး) [2016 Album] (320Kbps!)
Looking To My Eye - တေဇ MC (Feat.သားကြီး)
အသက်ထက်မက - လူခေတ်
စိတ်တိုင်းကျ - Double Nyi (Feat.ဘိုလေး)
စိတ်မကောက်ပါနဲ့ - တေဇ Mc (Feat.ရွှေထူး၊ရဲသူ)
ကျုပ်နဲ့အပျိုကြီး - Dobule Nyi
I Love You Baby - လူခေတ် [Feat. Agga Moe]
အလဲ့ . . . လဲ့ - တေဇ MC
တာင်းဆု - လူခေတ်
နှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒ - တေဇ MC (Feat.ပစောက်)
ကောင်မလေးရေ - Double Nyi
လက်တွေတွဲထားမယ် - လူခေတ်
မုန်းချင်လဲမုန်းလိုက် - တေဇ MC, Dobule Nyi
အမှတ်တရဖေဖော်ဝါရီ - လူခေတ်
Two - တေဇ MC, Dobule Nyi
I'm A Fool - Dobule Nyi
Tags # 320 Kbps! # Album # Double Nyi # High Quality # Lu Khit # Tay Za MC # လူခေတ်
Labels: 320 Kbps!, Album, Double Nyi, High Quality, Lu Khit, Tay Za MC, လူခေတ်